Eyona nto ihamba phambili kwiimveli zengxelo zeQGIS 3.X - Geofumadas
Epreli, 2019 ezintsha, qgis
Kuyathakazelisa indlela i-Open Source initiatives eyenze ngayo ukuzinzileyo ngendlela ezinzileyo kunye nokubonelela ngamathuba oshishino kulabo banexabiso elongezelelweyo lokufaka isandla; ngelixa uvumela ukuzinikezela kwingundoqo yoshishini ukwazi ukuba iimfuno ziya kugutywa ezinye iingcali zodwa. Ndiyayithanda i-WordPress, i-PostgreSQL ne-QGIS phakathi kwale mizekelo.
Kukude kweso sithuba sokuqala esilenziwe kuso I-GUM 1.02 kwi-2009 nakwii Impembelelo yeQGIS 3 kwi2016. Tsiba nayo yonke into ucele lubonise mbopheleleko apadrinadores zabo, ukuzinikezela kubahlali yophuhliso kodwa ingakumbi nokwamkelwa ngabasebenzisi abathe bakhulela ukuba Ulindele ukuqonda ngaphezulu; ngaphaya kwezikhundla zeTaliban malunga necala langasese, kugxininise kumandla okukhuphisana kweQGIS. Kule nqaku, kwinqanaba lethu, siza kubonisa ezinye izakhi kunye neentshukumo zenguqu zatshintshana kutshanje kwizinto eziye zaboniswa emva kwesi sigwebo, esiyazi ukuba asiyikugqibela.
"Siyakuvuyela ukuvakalisa ukuqaliswa kweQGIS 3.6 'Noosa'! UNoosa wayeyindawo yokubakho yasekuhlaleni kwabase-Australia kwi-2017. "I-Blog ye-Qgis
Ukusuka kwinguqulo ye-2.8 Las Palmas, umbono we-interface uphuculwe, kunye neyona ndlela ihlaziywe ngayo yamacandelo amanqaku kunye namamenyu amakhulu. Kwixesha elidlulileyo eliyaziwayo, i-3.6 Noosa, unako ukuqhubeka nokwenza ngokwezifiso, ukulungelelanisa kwiprofayili yomsebenzisi kunye neemfuno zakho ezibonakalayo. Singahamba ukusuka kwimbono eqhelekileyo ukuya kumbono ebusuku, sinceda abo bachitha iiyure ezininzi benza iintlobo ezahlukeneyo zeenkqubo.
I-Qgis 3.4, ungena kwimenyu yongeziweyo, kukho ukhetho olukhoyo Ukulayisha i-QSS - iI themes, kwi-injini yosesho, kwaye emva kokufaka, kwimenyu yokongeza, uza kufumana ukhetho Ukulayisha i-UI Theme. Ukusuka kwifestile eliphumo ungakhetha kuzo zonke iinketho naluphi na olufanelekileyo.
Kuhlobo lwe-3.6, inketho ye-Night Mapping iya kudibaniswa, kwaye iyakwenziwa kusebenze kwiipropati ze-interface, ukuze ungalokothi ukhupha kwaye ufake ii-add-ons.
Kwimbono ephambili, iibhokisi zosesho zongezwe, apho esinokufumana khona izixhobo zokusebenza okanye izixhobo ngokukhawuleza; njengoko, umzekelo: i-calculator, ukuqwalasela, ukulungisa i-algorithms, ukuchonga iziqendu zeprojekti, okanye iimakishi zendawo.
Kwifestile yefayili yoluhlu, ibhokisi lokukhangela longezwe, apho unokufumana khona iinkalo okanye iinkqubo ezinxulumene nocingo. Umzekelo, igama lifakwa kwi-injini yokusesha iimpawu (1) kuvela iimpawu panel nokusebenza umaleko, bonke abo imiyalelo eziqulathe ilizwi zobumnini (2), ngoko ukuba ukhetha omnye wabo, ungabona ukuba ukhetho enye iqulethe ilizwi iimpawu (3).
Xa senza nayiphina inkqubo kumgca, njengophawu lokufakela, kwakungekho nqondiso ebonisa ukuba uluhlu luluhlu. Kwezi iinguqulelo ezintsha, bobabini 3.4 njengokuba 3.6, ziye longeziwe Iimpawu inkqubo maleko, njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo, ukuze umhlalutyi uyakwazi ukubona nguwuphi na ecociweyo, zibloke okanye Uluhlu lwesiphuli.
Kule mihla yokuhlaziywa, umkhiqizo we-cartographic ungaveliswa, ucacise iprofayile yomsebenzisi oza kwenza utshintsho okanye iinguqulelo. Kwimenyu enkulu; kunokwenzeka ukudala ezininzi iinkcukacha zomsebenzisi njengoko kufunwa kwaye iiprojekthi zeefayile nganye zigcinwa kwiifolda zengcambu ze-Qgis 3. Umendo into efana nale yabasebenzisi beWindows: C: \_ Umsebenzisi \_\_ AppData \_ ukuzulazula \_ QGIS \_ QGIS3 \_ profiles \_ default
Ngokubhekiselele ekusebenziseni i-vector okanye i-raster entities, ubuncinane be-algorithm sele zifakiwe, kwaye ezinye ziphuculwe ngethuba lomsebenzisi olungcono
Xa ufaka iinkampani ezingenayo inkqubo yesithenkethi ecacileyo, isicelo siya kucela ukubonisa ukuba indawo yendawo yale data iya kuba yindawo. Iwindow ivula, apho ungakhetha kwiinkqubo ezahlukeneyo zoqhagamshelwano ezivela kwihlabathi lonke, phantsi kwayo, indawo yenkqubo ekhethiweyo ibonisiwe, kwimephu kwaye unokuqinisekisa ukuba kuchanekile, ngaphambi kokuba ungeze idatha kunye neengxaki zendawo zenzeke.
Uhlobo lwamanyathelo ngoku lulula, njengezixhobo ezizimeleyo okanye eziplasini, kodwa ke kufuneka uqhubeke uvule kwaye uphume ukuhlela, ubuncinane kwi-3.4 version. Izixhobo ziye zafakwa njengolu hlobo: ukulungiswa kwamashishini, ukuhlolwa kweengcinga, ukutshintsha kwendlela-ukuguqula umgca-, okanye ukuhamba kweempawu zenye okanye zonke izitha. Ngomxholo we-3.6 Noosa, ithuba lokuhlaziya i-algorithms ngexesha lokuhlela kulindelwe, ukuphepha ukudala izitsha ezintsha.
Kwibhokisi yetshukumo yokusebenza, kukho imisebenzi yokukhetha izinto ngaphakathi kwamacandelo ngokweentlobo ezahlukeneyo zeempawu, ezifana noku: kukhethwa ngamacandelo, ukhetho ngokubonisa okanye kwindawo. Abaphuhlisi beQgis 3.6, baye bachaza olunye uhlobo lokukhethwa, olubizwa ngokuba lukhetho ngokubaluleka, oluhambelana neempawu ezikhoyo kwi-vector entity.
Enye izicelo ezenziwe ngabasebenzisi, waye ukusungulwa CADtools ngumphelelisi ka-uguqulelo 3.6, ngazo naziphi na iinguqulelo 3.X, waye okuchazwe, kwaye ufake umphathi add-ons lubonise ukuba inguquko ephelelwe ukuba khona ayikwazanga kuphunyeleliswa .
Ukubhalisa yinto enye ephuculwe ngazo zonke iindlela. Kulula kakhulu ukubeka ilebula elula okanye ukudala ukubhaliswa kwamaziko ngokusekelwe kwimithetho. Ezi zikhetho zongezwa thintela, Oku kunceda ukuba ngelixa iilebhile zezinye iindawo zenziwe, zingaphazamisa ukubonakala kwamagumbi, kwinqanaba elivaliweyo.
Iimpawu ezintsha zitshintshiwe kwaye zongezwa ukufumana isimboli esifanelekileyo, ezifana nokufikelela-iqhosha lokungqambela kwinqanaba - kwiifayile zamashishini. Kwi-Qgis 3.6 Noosa, imiba enjengokuboniswa kwezitayela zongezwa xml, kwipaneli yomkhangeli okanye imigaqo.
Ngokuphathelele iinkqubo ezinxulumene ne-raster, izilungiso ezininzi ziye zongezwa ukwenza inkqubo yokucoca kunye nokuhlalutya. Oku kwapheleliswa zonke iimpawu zangaphambili, ukubala amanani kukho yeraster ngokusekelwe omnye umthamo ubalo kummandla, ukumisela amaxabiso M, ukumisela amaxabiso Z ngokungqinelana eziphezulu ze band nganye, okanye utsala isiqulatho ifomathi yebhanki - kunye nefowuni yefowuni kwimimandla ebinzana (ibhloko) -. Kwakhona, kule ngongoma, i-renderer yexabiso eliyingqalileyo kunye namanqaku omfanekiso we-raster afakiwe.
Kwidatha ye-3D, ukhetho olutsha lufakwe njenge-shading yomhlaba, oko kukuthi, umhlalutyi uya kuba nako ukunquma indlela eya kumelwa ngayo umzekelo wakhe. Ukongeza, unokuqwalasela izibane kwii-3D, apho unezibane ze-8 apho isikhundla, ubungqongqo, umbala kunye nokulinda.
Kuphuculwe ulawulo lweprojekthi, kuquka imisebenzi efana awafake iifolda projekthi, njengoko kwenziwa ArcGIS Pro, umzekelo, ke ngoko zigcinwe kwindawo enye yonke inkqubo kunye nemveliso ezinxulumene-project. Kwimaski Ukuqala kweprojekthi, iprojekthi yokuqala iqulunqwe, oko kukuthi, indlela apho idatha ekufuneka iqhutywe ngayo
Olunye uphawu oluye lwangena kwipulatifomu lunokwenzeka ukubona iimbono eziliqela kwimephu, kubandakanywa neenkcukacha ze-3D. Ukusuka kwimenyu esemqoka, kwindlela yokujonga, kukho iindlela ezimbini zokufaka imibono, imbonakalo yeemephu 2D (Ukujonga kwemephu entsha - ctrl + M) okanye i-New View view 3D. Emva kokuba bakhethe uhlobo lwembono yokongezwa, banokufakwa kwiindlela ezahlukeneyo kwaye badibaniswe kwimbono ephambili, kwicala elinye - ipaneli yangakwesokudla - apho zombini imibono ingafakwa okanye ifane nombono ophezulu.
Ngokubeka abantu abaninzi, unokuqinisekisa iinkalo ezithile zemephu ephambili engayi kubonwa kwimveliso yokugqibela yomveliso. Ifestile nganye entsha ihlanganiswe ngokupheleleyo kwisakhiwo se-interface, ngokungekho kokuvumelanisa okanye kungekhona nedatha kwindowudla ephezulu, ukujonga idatha kwinqanaba elithile, ukubonisa izichasiselo, isikhundla sesikhombisi okanye iilebula.
Ukuba sibuyela kwixesha elidlulileyo, kwaye sisebenzisana nokusetyenziswa kwesi sixhobo kwiinguqu ezandulelayo, wonke umntu uya kuvuma ukuba kwakunzima kwaye kunzima; de ukufikelela kwinqanaba apho ulwazi oluchitshiweyo lukhishiwe kwaye bafuna ukusebenzisa ezinye iinkqubo ukuvelisa umkhiqizo wokugqibela. Kule nguqulelo zakutshanje, le nkonzo iphuculwe ngaphakathi, kwaye ivumela ukushicilelwa kweembono ze-3D. Umhlalutyi angenza enye okanye imixholo emininzi yombono ofanayo, ngaphezu kokukwazi ukongeza amaphepha ekubunjweni kwayo.
Ukongezwa kuzo zonke ezikhankanywe ngasentla, ezinye iinkcukacha zongezwa, kwaye unako ukufaka ezinye iintlobo zedatha ezifana ne: Inkxaso ye-3D Mesh - kunye nayo yonke into equka ukuphathwa kwale datha, njengokuchongwa kwezinto-.
Iipakethi kunye neefoto ezijikisiwe
Ngaphakathi kweQgis, ukusebenzisa kunye neepakheji, ngoko baye bagcina iipakethe zendawo ngaphakathi kwibhokisi yeethuluzi zokusetyenziswa - kuyavakala ukuba ndijwayelene kakhulu nam njengoko ndenze nge-ArcGIS Pro-.
Kwakhona kulindeleke ukuba ezinye izixhobo ezingasetyenziswa kwi-3.4 version ziya kuqhubeka zibandakanywa, phakathi kwazo eziza kuthiwa: ukungenisa kweefoto ezitshintshileyo-ezifakwe kwibhokisi yezinto zokusebenza. Ngalesi sixhobo, uluhlu lwesalathisi luyilwe, apho i-geo-tagged or geolocated images ikhona. Imifanekiso kufuneka ibe kwifomati ye-JPEG, kwaye yonke i-directory ingeniswe kwinkqubo, ngaloo ndlela idale imveliso yendawo kunye neempawu zokuphakama.
Ezinye iindaba zeQgis 3.6
Ukongeza zonke okhankanywe ngentla, iimpawu, iimpawu, add-ons zilandelayo, leyo ibandakanywa akukho ndlela ezinokuthelekiswa kunye neenguqulelo 2X ezidityaniswe nguqulo:
Umlawuli wenkcazelo yedatha uxhasa ukudalulwa kweziqulatho ezibonakalayo, idata yedatha yedatha - yedata yeenkcukacha, ne geopacks -
Uluntu lwabasebenzisi kunye nabathuthukisi, uye waphawula ukusetyenziswa kolwimi lweC ++, ukulungiswa kwakhona okanye ukuphuculwa kwee-algorithms zangaphambili.
Ubunokwenzeka bokudala iindidi, ukuqoqa kunye nokuzibandakanya. Kuye kwaququzelela abaqhubi, imisebenzi eguqukayo eya kunceda ekwakheni izimvo ngendlela elula.
Iinkqubo okanye imisebenzi zenziwa ngasemva, ngoko aziphazamisi ekufezekiseni kwezinye izinto.
Baninzi -kuquka nathi- Sibuze imibuzo kwiifom yezinto ezithile, izixhobo okanye imisebenzi ye-Qgis, ngenxa yokungabikho kwamaphepha amaninzi kwezi zinto. Kule nguqulo entsha, iqela lonjiniyela liye labonisa ukuba kukho amaxwebhu angcono malunga neenkqubo kunye nezixhobo ezenza le GIS.
Enye yezinto ezisetyenziswayo ezincinci, kodwa sinethemba lokufaka ubungqina, lixesha lokuhambisa isitifiketi, ezihambelana nezifundo ezininzi.
Ukunyuswa kwe-Hardware kwi-calculator ye-raster.
Ukuxhaswa kweJSON kwiiphakheji ze geo.
"I-QGIS isofthiwe ekhululekile kwaye akumele uhlawule nantoni na ukuyisebenzisa. Enyanisweni, sifuna ukukhuthaza abantu behlabathi lonke ukuba bayisebenzise, ​​kungakhathaliseki ukuba bahlala njani kwizezimali okanye kwizentlalo. Sikholelwa ukuba ukuqeqesha abantu abanezixhobo zokwenza izigqibo kuya kubangela uluntu olungcono kubo bonke abantu. "I-blog ye-Qgis
Njengabahlalutyi kunye nolwazi kummandla we-"Geographic Information Systems," esi sixhobo sokuhlalutya indawo, kwi-3.6 Noosa version, sinokubonelela ngeenzuzo ezinkulu ekwakhiweni kwemveliso. Kwiphepha elisemthethweni Qgis, iinguqulelo zisingathwa kweli nqaku. Umahluko phakathi nganye i 3.4 Madeira i ukukhululwa yokwakha ixesha elide, kunye fixes bug ezithi zenzeke ngexesha ukusetyenziswa. Kwelinye icala, inguqulelo 3.6 Noosa luguqulelo ngakumbi phawu-zizityebi abantu abakhotyokiswe, kodwa instabilities eqondakalayo kwenzeke bugs ngexesha lokusetyenziswa kwalo.
Post edlulileyo«Edlulileyo #BIM-Ikhosi yoYilo yoLwakhiwo isebenzisa iSakhiwo seRobhothi yeVenkile
Post Next Inkonzo yeWebhu yamaphupha amadala phakathi kweyona ndawo ebalaseleyo yeMephu ye-Map 28-124Okulandelayo "